Ogaden News Agency (ONA) – Qarax Khasaare Gaystay oo Magaalada Muqdisho Kadhacay.
Qarax Khasaare Gaystay oo Magaalada Muqdisho Kadhacay.
Posted by ONA Admin	/ August 28, 2017
Afar qof oo labo kamid ah ay shacab yihiin ayaa ku dhawaacantay qarax ka dhacay waddada mashquulka badan ee Maka Al-mukarama gaar ahaan meesha loo yaqaano Garaashkaa Xaaji Baasto kaas oo saraakiisha amniga ku sheegeen in uu ahaa gaadhi ladhigay waddada dhinaceeda.
Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaashanle sare Qaasim Axmed Rooble oo saxaafadda kula hadlay halka uu qaraxa ka dhacay ayaa sheegay in gaadhigan ciidanka ka war heleen isla markaana waddada la xidhay dadkana laga fogeeyay goobta uu yiiley gaadhiga qarxay.
Afhayeenka ayaa intaa ku daray in labo qof oo shacabka ah iyo labo askari oo booliiska ka tirsan ay ku dhaawacmeen. Goobaha ganacsi ee ka ag dhow meesha uu qaraxa ka dhacay ayaa burbur uu soo gaadhay, waxayna saraakiisha amnigu sheegeen in ay ka hortageen khasaare intaa ka badan oo uu geysan lahaa qaraxan.
Ciidanka amniga Soomaaliya ayaa howlgalo ammaanka magaalada Muqdisho lagu sugayo waday muddooyinkan dambe waxayna taasi keentay in ciidanka ka hor tagaan isla markaana fashiliyaan qaraxyo dhowr ah.